बोझिलो बुढ्याईँ र कलिलो क्रन्दन
बोझिलो बुढ्याईँ र कलिलो क्रन्दन रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
बाह्रखरी - बुधबार, असोज १७, २०७५
माता तीर्थ औँशी (आमाको मुख हेर्ने दिन) मा आमाप्रति श्रद्धा र स्मरण गरिन्छ । कुशे औँशीमा ‘पितृ देवो भवः’ को भावमा बाबालाई पुजिन्छ । सन्तानको माया र ममताको लाड प्यारमा आपसी नैसर्गिक तादात्म्य गाँसिदो रहेछ । मान्छेमा मात्र होइन, गाईले आफ्नो कलिलो सन्तानलाई जिब्रोले चाटेर माया दिन्छ । बाख्रीले पनि पाठापाठीलाई सकेङमा स्तनपानको जानकारी दिइरहेको हुन्छ । उसलाई थाहा छ; स्वतन्त्र नाचिरहेका, उफ्रिरहेका बच्चालाई कतिखेर बोलाउने । कुखुराले चारो खोज्छ, आफ्नो पेट भोकै भए पनि चल्लाका लागि अर्पिन्छ । बिरालो सन्तान रक्षाका निम्ति आफ्नै ज्यानलाई दाउ थापेर कुकुरमाथि झम्टिन पुग्छ । सन्तानको मायामा ऊर्जा जाग्दो रहेछ । पशु, प्राणी सारा सृष्टिमै आमाको माया सन्तानका लागि कति अमूल्य हुँदो रहेछ ? कति दर्बिलो छ ममताको आदर्श ।
संस्कृतिले रुढीबाहेक पनि अनुशासनमा समाजलाई सजाएको हुँदो रहेछ । हाम्रा इतिहास, वेद, शास्त्र, पुराणमा मातृ हृदयको आदर र आदर्शलाई प्राकृतिक शक्तिमा एकाकार बनाइएका हुन्छन् । नौ महिना कोखमा राखेर अनेक पीडा र वेदनालाई आमाले भोगेकी हुन्छिन् । प्रसव वेदनासँग जीवन मृत्युको दोसाँधमा आमाले सन्तानलाई जन्म दिन्छिन् । गरिबीको रापमा पिल्सिएकी आमा छिन् भने अभावका सोपानसँग सन्तानकै विकासार्थ जुध्छिन् । जाडो गर्मी भोकतीर्खा, रोगशोकबाट बँचाउँदै देखभाल गरेर हुर्काउँछिन् ।
दिसापिसाब सोहोर्दै तातेताते गरेर बढाउँछिन् । तुलनात्मक हिसाबमा बाबाभन्दा आमाको योगदानकै कारणले होला मातृबात्सल्यलाई शिरोधार्य गरेर सन्तानले जीवनका गोरेटाहरूलाई चलाउँछ । आमा नभए जोसँग गाँसिएको छ ममताको तार उसैको सहारामा जिउँछ – मानिस । आमाबाबाको आशीर्वचन नै सन्ततिका प्रगति पथ बन्छन् । जन्म दिएपछि कति ममताले कर्म दिएर हुर्काएका पनि होलान् । बाबाको कर्मशीलता या त कोही अग्रजको सहाराले बाटो दिएको होला । एउटा जीवनको प्रारम्भसँग ठूलो हिस्सा गाँसिँदो रहेछ ।
विडम्बना, त्यही सन्तान हुर्केबढेपति अहम् भावमा पौडिँदा बालापनको मार्गदर्शकलाई बिर्सन पुग्छ । बिस्तारै जवान बन्छ, त्यो त प्रकृति हो हुनुपर्छ । बरू नबन्दा समस्या हो । उता बुढ्याईँले डाँडा पारीका जुन बन्दै गएका बाबाआमा भने त्यही सन्तानका लागि बोझ बन्छन् । बुढेसकालमा स्वाभाविक हो, कर्म गर्ने शक्ति क्षीण बन्दै जान्छ । स्मरण वा सुद्धि पनि स्वभावैले कमजोर बन्छ । बोझ त बन्ने नै भए अनि बुढेसकालको सहारा भनिएको निष्ठुर छोराले वृद्धाश्रममा लगेर छोडिदिन्छ । पाषाण हृदयको पीडाले अश्रु बहाएकी आफ्नी आमाले त्यै सन्तानको दर्शनको आशा राख्नुपर्छ । सुटबुटमा सजिऐको सन्तानले छिः छिः र दूरदूर गरिरहँदा ती ममतामयी हृदयले आफ्नो सन्ततिलाई देखिसक्दा अतालिएर छाँद हाल्न वृद्ध वदनलाई सकिनसकी घिसार्छिन् । भावले गहभरी आँसु बहाउँछिन् । हिजो सासूससुराको दलन हुन्थ्यो आज बुहारीको चर्को दमन र आडम्बर बढेको छ । कति दलन र अपहेलनालाई भुल्छिन्– वृद्ध आमा । तै पनि त्यो पाषाण हृदय पग्लिँदैन । सन्तानको मायामा रहेर रमाउन चाहेका बूढेसकालको सहाराले पैसाभन्दा ठूलो अरू केही नदेखेपछि मृत्युका दिन गन्नु सिवाय बाँकी विकल्प बच्दो रहेनछ ।
दुनियालाई पद, पैसा र प्रतिष्ठाको भूत चढ्दै गर्दा ममता र भ्रातृत्व मरिरहेको छ । बाँचुन्जेल आमाबाबालाई वास्ता नगर्ने पुत्रले मरेपछि तिनका नाममा गरिएका श्राद्ध, दान, पुण्ये ढोंग होइन र ! हिजोको तुलनामा समाज दिनानुदिन कठोर बनेर लालची दलदलमा फसिरहेको छ । दीनहीन वृद्धवृद्धाका लागि, जवानीमा कति खानेलाउने मन हुँदा अभावले छोडेन । अहिले अभाव नहोला तर खटनमा चल्नुपर्छ । गालासँगै चाउरिन्छ सन्तान स्नेह । कतिका लागि रोगका कारणले धक खोलेर आँत मार्ने गरी खाने इच्छा नै अधुरै रहन्छन् ।
कार्यगत व्यस्तताभित्र हराएका मानिसभित्र मानवता भन्ने कुरै खतरामा बाँचेको हुँदो रहेछ । हिजो हाम्रो समाजले पापको डर राखेर पनि मानवीय कर्म गथ्र्यो । धर्मको नामबाट बाटो, धारा, चौतारा बनाउने मानवीय भावमा समाजको सेवा भइरहेको हुन्थ्यो । आज आधुनिकताको नाममा आफ्नो भाषा, भेष, पर्व र कतिपय वैज्ञानिक तथा उपयोगी संस्कार समेत पतन भइरहेका छन् । रूढीवादको संज्ञा दिएर हामीले अत्याधुनिकताको सदुपयोगभन्दा अन्धानुकरण गर्दै आफ्नै पहिचानलाई समेत बिर्सिँदै गइरहेका छौँ ।
बाध्यताको जोहो या त अलिकति त फेसन, अर्काको अन्धानुकरण र रवाफकै कारण पनि धेरै युवा पिँढीले आफ्नै मातृभाषा जान्दैनन् । विभिन्न पर्वहरू मनाइन्छन् तर त्यसको इतिहास थाहा भइरहेकै हुँदैन । यद्यपि एउटा गर्व गर्न लायक कुरा हो– यस्ता विषयमा सञ्चार क्षेत्रले गरेका खोज र प्रचार साँच्चै नै सराहनीय लाग्छन् । हो सबैका सन्तान कठोर हुँदैनन्, ममताको रसलाई चाखेर बडो प्रेमसँग सुख दुःखमा रमाउँछन् । त्यहाँ आदर्श परिवारले बाँच्दो रहेछ । संस्कृतिले बाँच्ने अवसर पाउँदो रहेछ, पहिचान अटल रहँदो रहेछ । सबैका अभिभावकले आफ्ना सन्तानको आशा चुँडेका हुँदैनन् तर जहाँ चुडिन्छ त्यसले बाल मनोविज्ञानमा हमला गर्दो रहेछ । यसको परिणाम स्वरूप खोसिएको मायामा एउटा मन तड्पिँदो रहेछ ।
एकातिर दिनभर ठेलामा तरकारी बेचेर होस् वा सडकको छेउमा धुवाँ र धुलोसँग मितेरी गाँसेर नाङ्लोमा अलिकति सामान फिँजाएको कमाइले होस्, सन्तानलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा आमाबाबा तल्लीन हुन्छन् । विदेशमा मरूभूमिको तातो रापमा पिल्सिएर होस् या त सन्तानको भलाइ नै सबै ठानेर दिनरात मिहिनेतमा घोटिइरहँदा रहेछन् । के गाउँ के सहरका यस्ता तमाम आमाबाबालाई हेरिरहँदा अर्कातिर कोही आमाबाबा यस्ता पनि हुँदा रहेछन् जसले सन्तान परित्याग गरेर दोस्रो घर बसाउँदा रहेछन् । आज ममतामा समेत विचलन बढेकोे देख्दा सन्तानको मायामा बाबाआमा कति कठोर बनेका भैmँ लाग्छ ।
बाल अधिकार हनन र हृदयविदारक प्रहार आज सडकमा मात्र हैन घर, समाज, चोकभित्र दिनानुदिन भइरहेका छन् – हिजोभन्दा अलिक फरक ढङ्गले समेत । आमा एकातिर, बाबा अर्कातिर अनि बच्चाले कसरी जिउने ? आज यो जटिल समस्याको सिकार भएका बच्चाको अधिकारलाई कानुनले के भन्छ ? एकातिर अधिकारका नाममा हाम्रो संस्कृति र सामाजिक न्याय नै कलङ्कित भएको छ । ‘बाबाले घरमा अर्की आमा ल्याउँछन् । पहिलो परिवार काउछो बन्छ । बिस्तारै आमा पनि अर्कोसँग जान्छिन् अनि त्यो बच्चा धर्तीमै जीवित आमा बाबाको टुहुरो सन्तान झैँ बन्दो रहेछ । त्यसपछि त्यो सन्तानमा शारीरिक, मानसिक हिंसा र दुर्व्यवहारको सिकार बन्दै जान्छ । अझ बाबाले ल्याएकी अर्की आमाको आडमा बाँचेको झर्के र बोझिलो सन्तानको दिनचर्या मनोवैज्ञानिक रूपमा उमेर बढेसँगै साह्रै पीडाप्रद हुँदो रहेछ ।
आमासँगको तार जन्मपूर्वकै अवस्थाबाट गाँसिएकाले होला बाबाले अर्की आमालाई भित्रयाउँदा भन्दा पनि धेरै आमाले छोडेर अर्कैसँग गइदिँदा सन्तानको जीवन धराशायी बन्दो रहेछ– प्राकृतिक रूपमा आँकलन गर्दा । कतिपय बच्चालाई आमाले पालन पोषण गरिरहँदा बाबाले फकाएर आपूmसँग तान्न खोज्दा रहेछन् । कति आमा अर्कैसँग गएपछि सन्तानलाई सँगै लैजाने होड चल्दो रहेछ । सन्तानले बाबा आमाको संयुक्त स्नेह खोजिरहँदा उल्टो अचानोमा बच्चा पर्दो रहेछ । सन्ततिले जन्मदिने आमा र जन्माउने बाबालाई कसरी तुलोमा जोखेर हेर्ने ? अन्ततः उसको पहिचानमै सङ्कट उत्पन्न हुँदो रहेछ । छोराछोरीले कस्को सहारामा बाँच्ने ? भवितव्य परे त चित्त बुझाउने बाटो बन्ने रहेछ तर दुःखमा रूँदा आखिर आमा कस्लाई भन्ने ? या त सुखमा खुसी कोसँग बाँड्ने ? बजारमा चक्लेट देख्दा कोसँग लाडे स्वरमा किनिमाग्ने या नपाए लडीबुडी गरेर किनिदिन आग्रह गर्ने ? बाटामा अरुका बाबाआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई हातमा डोर्याएको देख्दा त्यो बच्चाको मन कस्तो होला ?’
कानुनका पानामा बहुविवाहका कुरा छन्, पारिवारिक सम्बन्धका विषय मुलुकी ऐनबाटै छन् । भदौ १ गतेबाट लागु कानुनभित्र आमाबाबाले छोडेका सन्तानको आवाजलाई कसरी सम्बोधन भयो ? जुन बच्चाले न त नियम जान्दछ न कानुन के उसले आमाबाबाको पारिवारिक माया नपाउँदा न्याय माग्न जान्दछ, सक्छ या त सम्भव छ ? जुन औँलामा विष लाग्छ त्यै झर्छ । नैतिक आदर्शको दृढतामा भए ममतामा विचलन हुने प्रश्नै उठ्दैन । आपैmँ सचेत आमाबाबामा भने सन्तान प्रेम र आदर्श आचरण नै सफल जीवनको द्योतक बनिरहेकै हुन्छ । कर्तव्य या बाध्यता सम्झेर बच्चालाई होस्टलमा राखिएका हुन्छन् । आमासँग बसेकी, आमाले विद्यालयको शूल्क तिरेर पढाएकी छोरीलाई बाबासँग भेट्न नदिनु भनिरहँदा विद्यालयमा बाबा आएर भेट्न चाहन्छन्, प्रशासनलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्न भ्याउँछन् ।
सामान्य बुझाइमा विवाहित छोरीको थर परिवर्तित हुने गर्छ । सन्तानको थर बाबाको थरबाट निर्धारित हुने नियम छ । यद्यपि आमाले पतिको थर फेरेर आफ्नो माइतीको थर राख्छिन् । आमा अन्यायमा हुँदा झनै गाह्रो रहेछ । अर्कोतिर आमाले बाबासँग सम्बन्धविच्छेद गरी मावलीको थर राखिएको व्यक्तिले भोलि कोसँग अंश माग्ने । नागरिकता मावलीको थरबाट बन्ला त ? भवितव्य या दुर्घटनाको पीडाभन्दा बच्चालाई जीवित आमाबाबाले खोसेका आड र काख हृदयविदारक बन्दो रहेछ ।
ममता टुटाइएको या पितृत्व खोसिएका अर्थात् दुवैले आ–आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएर कोही आफन्तका आडमा छोडेर घर बसाएका होऊन्, यसको सिकार त बच्चै बन्ने रहेछ । आमासँग बसे बाबाप्रति र बाबासँग भए आमाप्रति बच्चाको मस्तिष्कमा विरोधी भाव उत्पन्न गराउने कसरत समेत चलाइँदो रहेछ । समग्रमा आमाबाबाको कमजोरी र महत्वाकाङ्क्षाले निर्दोष सन्तानको भविष्य सङ्कटमा पर्दो रहेछ । कति दूधे बालकका ममता चुँडिइरहेका छन् त कति चरित्रहीनताका कारण जीवित भएकै बाबाको पितृत्व भाव खोसिएको छ ।
सन्तानका ममतामा बज्र हानिएका घटनाले समाज नै रूढीग्रस्त बनिरहेको छ । आमा बाबाको यौनपिपासु चरित्रले बच्चाले आफ्नो पहिचान नै गुमाउनु पर्दो रहेछ । मानिसमा नैतिक ज्ञान र आदर्श अनुशासनका कुराहरू दिनानुदिन ह्रास भइरहेका छन् । प्रेममा विचलन छ । आपसी सम्बन्धमै विश्वास घटिरहेको छ । जति आधुनिकताको विकास हुँदै छ त्यति यो विकृति बढिरहेकै छ । कोही आमा बाबा सन्तानको लोभानीपापानीको सिकार बन्छन्, उपेक्षित बन्छन्, सन्तान दमन र प्रेमको अभावबाट मनोरोगी बन्छन् । कति सन्तानमा आमाबाबाको कमजोरी र सूक्ष्म चाहनाको अचानोमा परेर मनोवैज्ञानिक असर पर्दो रहेछ । त्यो कलिलो क्रन्दनले अभिभावकत्व कसरी पाउँछ ! अनि त्यहाँ अनेकौं हिंसाको सिकार बनेका र बन्नुपरेका पीडा कति होलान् ! आखिर मानवीय आदर्शलाई नै प्रहार गरिरहेका वृद्ध आमाबाबा अनि निर्दोष कलिला सन्ततिका जीवनमा बगिरहेको रोदन अश्रु सामान्य पक्कै लाग्दैन ।
बुधबार, असोज १७, २०७५ मा प्रकाशित